Rise Archives — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
phakama phakama phakama phakama phakama phakama phakama phakama phakama phakama phakama phakama phakama phakama
Ininzi kakhulu ukubona, ukwazi, ukuthanda, ukonwabela. Kukho zokwenene kakhulu kangangokuba ayinako inokwehliswa fun. The words “fun” “blast” “ball” “party” sound silly in the…
Ngaba uyazi ukuba wena umthanda…
e 2012, Ndabhengeza ukuba usaya "unyathele kude umculo." Ewe,, Ndiyazi ukuba izandi umhlala-ikhe-, kodwa ngabom akazange ukusebenzisa ukuba ilizwi. Ndazigcina ngabom ezingacacanga kuba mna ndandingekho 100% sure what it would…